तिहारमा भैलो खेल्न पठाउने बलिराजा को थिए? - In Depth Nepal Pvt. Ltd.
साँच्चै को थिए बलि राजा ? कुन मुलुकका  हुन ? अनि के संङ्कट पर्यो ? नेपालमा गणतन्त्र घोषणा हुँदा राजा ज्ञानेन्द्रलाई आपत परेको बेला सिंह दरबार छाडेर नागार्जुन बास माग्ने अवस्था जस्तै भएको थियो तिनलाई ? कुन जुगका थिए ती ? कि जहिले पनि तिनले पठाको भनेर पैसा मागिन्छ ? हरेक तिहारमा यस्ता प्रश्न सबैका मनमा उठ्नु स्वभाविक नै हो । यसको उत्तर पाउन त्यति सजिलो छैन ।
दिदी बहिनी दाजु भाईको मिलनको चाड तिहारको रमाईलो पक्ष भैलो र देउसीको नाचगान हो । भैलो तथा देउसी खेल्न युवा र केटाकेटी मात्रै होइन, प्रौढ र पाका उमेरका मान्छेहरु पनि निकै रौसिन्छन् । टोली नाईकेले लय हालेर नाटकीय शैलीले भट्टयाउने र सहभागीहरुले भैलो तथा देउसीरे घन्काउँदै सामूहिक रुपमा नाँच्ने चलन नेपालको मौलिक विशेषता हो । नाँच्ने क्रममा यस घरको मन ठूलो छ, दान पनि ठूलै हुन्छ, भैलोलाई मुठीखोलेर दान दिन्छन्, मिठामिठा परिकार दिन्छन्, छानामाथी घिरौला के के दिन्छन् हेरौला भन्दै खुब फुक्र्याइन्छ । त्यसै क्रममा हामी त्यसै आएका हैनौं, बलिराजाले पठा’को भन्ने गरिन्छ ।
सदियौं देखि लाटा अनि एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट पिल्सीदै आएका र अध्ययन, खोज र अनुसन्धानमा खासै चासो नदिने मगर जाति र अन्य जनजातिकै कारण यस्तै मौलिक महत्व बोेकेका अनेकौं हाम्रा सँस्कृतिहरु हिन्दूकरण भएका छन् । मगर राजाको इतिहासँग जोडिएको यस्तो ऐतिहाँसिक पर्वलाई तागाधारीले पुराण कथासंग जोडेर व्याख्या गर्ने गरेका छन् । उसो त उनीहरुले पनि बलिराजालाई दानी व्यक्तित्वका रुपमा व्याख्या गरेर जसले जे माग्यो, त्यही दिने अति उदार स्वाभावका भनेका छन् । अझ यतिसम्म भन्न भ्याएका छन् की दानव कुलका शक्तिशाली बलिराजाले ईन्द्रको स्वर्ग कब्जा गरे ।
इतिहासकार, अध्येता अर्थात क़लम बोकेका तागाधारी लडाकाहरुले काग पूजा, कुकुर पूजा, गाई पूजा, गोरु पूजालाई आफ्नो शास्त्र अनुकूल ब्याख्या गरि तिहारलाई यमपञ्चक भन्नु भनेको मगरहरुको मौलिक पर्वलाई तोडमोड गर्नु हो । मगर राजाले स्थापना गरेको मगरको मौलिक पर्व तिहार हिन्दुहरुको मिथकसँग जोडेर यम पञ्चक भनेर भ्रम सिर्जना गरिएको छ । अझ पछिलो समय त यतिसम्म गरिएको छ की भैलो–भैलो भन्न छाडेर भैलीको पछाडी राम थपेर भैलीराम भन्दै भट्टयाउने गरिएको छ । फाईलो–फाईलो बाट अपभ्रंश हुँदै भैलोसम्म आईपुग्यो । यदि मगरहरुले आफ्नो इतिहासलाई नखोज्ने, अनुसन्धान, अध्ययन नगर्ने हो भने कालान्तरमा हाम्रा पूर्खाहरुले भैलीराम नै भन्नेछन् । अनि मगर राजा बलिहाङले चलाएको एउटा ऐतिहासिक पर्व तिहारलाई पुरै हिन्दुकरण गरिनेछ र भनिनेछ- मगरहरु परापुर्वकाल देखि नै हिन्दु थिए ! यदि गम्भीर नहुने हो भने दास बनाउने सबैभन्दा पुरानो र अहिलेसम्म चलिरहेको अचुक यो अस्त्रबाट मगर पहिचान धुलिसात हुनेछ ।
मनोज घर्तीमगरज्युको manojg.com.np बाट साभार । मनोजज्यु नागरिक दैनिक, शुक्रबार साप्ताहिक र रिपब्लिका दैनिकको प्रकाशक संस्था नेपाल रिपब्लिक मिडियामा आबद्ध हुनुहुन्छ ।